कम हुँदै कोरोना – Jagaran Nepal
१८ साउन २०७८, सोमबार
कम हुँदै कोरोना
बुटवल – कोरोना स’ङ्क्रमणको उच्च जोखिममा रहेको प्रदेश ५ का विभिन्न जिल्लामा कोरोना आ’त’ङ्क कम हुँदै गएको छ । स’ङ्क्रमित निको भएर फर्किनेको सङ्ख्या पनि निरन्तर बढेकाले आतङ्क कम हुँदै गएको हो ।बाँके, कपिलवस्तु, गुल्मीलगायत उच्च जोखिमका जिल्लामा निको भएर फर्किने बढेका छन् तर पश्चिम नवलपरासीमा स’ङ्क्र’मण थपिएको छ ।
समाचारदाताका अनुसार गुल्मीमा ३४१ जना स’ङ्क्रमितमध्ये १८३ जना उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन् । स्थानीय तहले निर्माण गरेका विभिन्न आइसोलेसनमा बस्दै आएका उनीहरू निको भएर घर फर्किएको स्वास्थ्य कार्यालय गुल्मीका सूचना अधिकारी पशुपति आचार्यले जानकारी दिए । गुल्मी जिल्लाका विभिन्न आइसोलेसनमा राखेर १५५ जनाको उपचार भइरहेको छ भने ९४२ जना क्वारेन्टाइनमा छन् । हालसम्म जिल्लामा कोरोना स’ङ्क्र’मणका कारण तीन जनाको ज्यान गइसकेको छ ।
नेपालगञ्ज समाचारदाताका अनुसार बाँके जिल्लामा पछिल्लो समय कोरोना सङ्क्रमित घट्दै गएपछि सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी र सञ्चारकर्मीको परीक्षण सुरु गरिएको छ ।
कोभिड–१९ रोकथामका लागि पत्रकारको भूमिकाका बारेमा शनिबार नेपालगञ्जमा स्वास्थ्य कार्यालयले आयोजना गरेको कार्यक्रममा २२ जना पत्रकारको स्वाब सङ्कलन गरिएको छ । नेपालगञ्जका विभिन्न स्थानबाट आकस्मिक स्वाब सङ्कलन पनि सुरु गरिएको बाँकेका कोरोना फोकल पर्सन नरेश श्रेष्ठले बताउनुभयो । नेपालगञ्जको टाँगा स्टेसन क्षेत्रबाट शुक्रबार ९८ जनाको स्वाब सङ्कलन गरिएको थियो । राताेपाटीबाट
कक्षा १२ को परीक्षा सेन्टर ताेकियाे, कहाँ पर्याे ? छिटाे हेर्नुहाेस
आजै देखी १८ गतेसम्मकालागी अत्यावश्यक बाहेकका सेवा बन्द गर्ने निर्णय (बिज्ञप्ति सहित)
एसईई नतिजा आउने मिति ताेकियाे
असोज देखि नेपालमा सङ्क्रमणको तेस्रो लहर आउने
भ्याक्सिन लगाएको केहीलाई प्यारालाइसिसको सम्भावना- यस्तो हुन्छ पहिलो संकेत !
नयाँ भाडा दर सार्वजनिक, कहाँ पुग्न कति ? (सूचीसहित)
आज साउन १८ गते साेमबार, निकै राम्रो छ यी राशिको भाग्य, हेर्नुहोस् दैनिक राशिफल
सम्बन्ध विच्छेद गरी छुट्टै बसेकी श्रीमतीले श्रीमानलाइ मध्यरातमा फोन गर्दै भनिन्, ‘ए.. हजुर ! प्रेसरको दबाइ लिइरहनुभएको छ नि ?’
डब्लुएचओले दियो संसारलाई त्रसित गराउने खबर ! अब बन्द गर्नै पर्छ?
निकै राम्रो छ यी राशिको भाग्य, हेर्नुहोस् साउन १७ गतेदेखि २३ गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफल
आज साउन १७ गते आइतबार, निकै राम्रो छ यी राशिको भाग्य, हेर्नुहोस् दैनिक राशिफल
निकै राम्रो छ यी राशिको भाग्य, हेर्नुहोस् साउन १६ गतेदेखि २२ सम्मको साप्ताहिक राशिफल
यी हुन् अश्लिल भिडियो सार्वजनिक भएका बलिउड सुन्दरीहरू
‘स’म्भोग अघि म’हिलाको ९ रु’चिहरु, जुन हरेक पु’रुषले जा’न्नै पर्ने हु’न्छ’ ।